Ibinzana elithi priori ligama lesiLatini elibhekisela ngokoqobo ngaphambili (inyaniso). Xa lisetyenziswe ngokubhekiselele kwimibandela yolwazi, lithetha uhlobo lolwazi olufumaneka ngaphandle kwamava okanye ukubonwa. Abaninzi bacinga ukuba inyaniso yeemathematika kukuba yinto yokuqala , kuba inyanisekileyo kungakhathaliseki ukuzama okanye ukubonwa kwaye ingabonakaliswa yinyani ngaphandle kokubhekiselele kumvavanyo okanye ukujonga.
Umzekelo, u-2 + 2 = 4 isitatimende esingaziwa ngokuba yi-priori .
Xa lisetyenziswe ngokubhekisele kwiingxabano, lithetha impikiswano ephikisanayo kuphela kwimimiselo jikelele kunye nokuchithwa kwengqiqo.
Igama elithi posteriori lithetha ngoko emva (inyaniso). Xa lisetyenziswe ngokubhekiselele kwimibandela yolwazi, lithetha uhlobo lolwazi oluvela kumava okanye ekubonweni. Namhlanje, eli gama lombuso liye lafaka endaweni yalo. Abaninzi bemibono, njengoLocke noHume, baye baxela ukuba lonke ulwazi luyi -posteriori kwaye ukuba ulwazi olungenakuqala alukwazi.
Ukwahlula phakathi kwe -priori kunye ne-posteriori kuhambelana ngokusondeleyo phakathi kokuhlalutya / ukudibanisa kunye nemfuneko .
Ulwazi loPhulo lukaThixo?
Abanye baye bathi ingcamango yokuba "uthixo" yiyona "ngumbono" ngenxa yokuba abaninzi abantu babengazange bafumane naliphi na ulwalamano oluthile lwabaphi na oothixo (abathile bathi banakho, kodwa ezo zibango azikwazi ukuvavanywa). Ukuhlakulela ingcamango enjalo ngendlela enjalo kuthetha ukuba kufuneka kukho into engemva kwesi sigqibo kwaye ngoko, kufuneka ukuba uThixo abe khona.
Ngokuchasene nale nto, abantu abangakholelwa kuThixo bayakuhlala bethetha ukuba "okubizwa ngokuba yi" priori concepts "akuncinci kunezinto ezingenasiphelo - kwaye nje ukutsho ukuba into ekhoyo ayithethi ukuba ithetha. Ukuba umntu uvakalelwa ngesisa, le ngcamango ingabelana njengento eqhelekileyo. Senza, emva koko, sinemiqondo emininzi yezidalwa zengqungquthela ezinjengeenkumbi ngaphandle kokuhlangabezana nenye.
Ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka i-dragons ibe khona? Akunjalongo noko.
Abantu baqulunqa kwaye banomsebenzi. Abantu baye badala zonke iindidi zeengcamango ezingamangalisa, iingcamango, izidalwa, izidalwa, njl. Ingqiqo nje yokuba umntu unokukwazi ukucinga into ethile ayifanelekanga nabani na ophelisa ukuba "into" kufuneka ibe khona ngaphandle kwehlabathi, ngaphandle ngcamango yabantu.
Ubungqina Bokuqala NgoThixo?
Ubungqina bobuqili kunye nobungqina bokuba kukho oothixo baqhubela kwiinkalo ezininzi. Enye indlela abanye abaxolisayo abaye bazama ukuyiphepha loo ngxaki kukukwakha ubungqina obuncikikiyo naluphi na ubungqina. Eyaziwayo njengezibonakaliso zengqondo zikaThixo, ezi ngxabano zibonisa ukuba uhlobo oluthile lo "thixo" lusekelwe ngokusisiseko kwimigaqo - siseko okanye kwiingcamango.
Iingxabano ezinjalo zininzi zabo iingxaki, kungekhona ubuncinci bokuba kubonakala ngathi bazama ukuchaza "uThixo". Ukuba oko kwakunokwenzeka, ngoko nayiphi na into esinokuyicinga ukuba yayiza kuba khona ngokukhawuleza nje ngokuba sifuna ukuba ibe njalo kwaye yayiyakwazi ukusebenzisa amagama amnandi. Leyo ayikho inkolo enokuthi ithathwe ngokungathí sina, mhlawumbi kutheni ifunyenwe kuphela kwiindonga zendlovu zeendlovukazi kwaye inganyanzelwanga ngumKristu ophakathi.
I-Posteriori Ulwazi ngoThixo?
Ukuba akunakwenzeka ukuseka ulwazi lwabaphi na oothixo abanamava, akunakwenzeka ukwenza njalo ngamava - ukubalisa amava abantu okubonisa ukuba ulwazi olusemva koothixo lunokwenzeka? Mhlawumbi, kodwa oko kuya kufuna ukuba sikwazi ukubonisa ukuba abantu ababhekiselwe kuwo babenokuthiwa nguThixo (okanye bekunjalo uthixo onokuthi bayabakho).
Ukwenza njalo, abantu abachaphazelekayo baya kufuneka bakwazi ukubonakalisa amandla okuhlukanisa phakathi nantoni na " uthixo " kunye nantoni na enye into enokuthi ibonakale njengothixo, kodwa ayikho. Umzekelo, ukuba umphandi uthi ixhoba lokuhlaselwa kwezilwanyana lihlaselwe yinja kungeyiyo ingcuka, kuya kufuneka ukuba likwazi ukubonisa ukuba banamakhono nolwazi oluyimfuneko ukuhlula phakathi koko babinikezela, banikezele ubungqina abasebenzisa ukufikelela esi sigqibo.
Ubuncinane, ukuba kwenzeka ukuba inja yakho yayityholwa, uyakwenza loo nto ukujongana nesiphetho, kunjalo? Kwaye ukuba abazange bakwazi ukubonelela zonke ezo zinto, ngaba awufuni ukuba inja yakho ibe necala lokuhlaselwa? Leyo ndlela enengqiqo kunye nenengqiqo kwimeko enjalo, kwaye ibango lokuba umntu ufumane uhlobo oluthile loThixo alufanelekanga nto, ngokuqinisekileyo.
Isingeniso kwiLogic and Arguments
Ngaba i-Creationism yeScience inory?
I-Second Crusade Chronology 1144 - 1150: UbuKristu bulwa nobuSulumane
Yintoni i-Agnostic Theism?
Yintoni Inkcazo Yokukholelwa KuThixo?
Iphrofayili kaFilipu Markoff Kananjalo eyaziwa ngokuba yi-Craigslist Killer
Iirekhodi zePGA Tour: I-72-Hole Score
IiRekhodi zeVault Pole Women
UFranklin & Marshall College Admissions
Ibhanti kwaye ivaliwe
Yintoni Ingqiqo? Yintoni Ukucinga Okubalulekileyo?
UCristie Kerr: UMninimzi oManyeneyo kwiLPGA Tour
Igama lomnina uStewart kunye neNkcazelo yalo kunye neNtsapho yeMbali
Indlela yokuchonga izilwanyana zomlilo
I-Spooling Line Kwi-Spin Cast Reel
Indlela yokusebenzisa iLwimi yesiNgesi engavumelekanga "Imvume"
Ubuhlobo obuhle kakhulu bobuhlobo bamaKristu
Oko Uyazi ngaphambi kokuba Uthenge izinto zoLwimi lwesiTaliyane
I-Texas Tech University Admissions
Iintlanzi ezilishumi eziphezulu kakhulu zikaGerald Levert